ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၇-၂၀၁၀)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၇-၂၀၁၀)
- သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ click
- ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ကျင်းပ click
- နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ကို သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုက မေတ္တာရပ်ခံ click
- အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ရှုတ်ချပြောဆို click
- နအဖ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ကလင်တန်က ပြစ်တင်ရှုတ်ချ click
- မြန်မာအစိုးရ ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း အိန္ဒိယက ပြောသင့် click
- စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်မှု အမှာစကားတွေ ပါးစေလို click
- စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ ထင်သာမြင်သာရှိဖို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် တိုက်တွန်း click
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အာဆီယံ ဖိအား ပြင်းထန် click
- အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတွေက မြန်မာ့အရေး click
- အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒကို ပင်ညဲရိုး ဝေဖန် click
- မြန်မာ့အရေးမှာ အိုဘားမား၏ ရှုံးနိမ့်မှု click
- အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာပေါ်လစီ မအောင်မြင် click
- မြန်မာကုန်ပစ္စည်းများ ပိတ်ဆို့မှု ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က သက်တမ်းထပ်တိုး click
- မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန်က ထောက်ခံမဲဖြင့် အတည်ပြု click
- မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အမေရိကန်က ဒေါ်လာ (၁၈၇) သန်း ကူညီ click
- ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေရေကာတာစီမံကိန်းတွင် တောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွား click
- ဝန်ကြီး၏ ပြောဆိုချက်ကို အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူများ သတိဖြင့် ကြိုဆို click
- ဖာပွန်ခရိုင်မှ သဒါးဒဲကျေးရွာ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခံရ click
- ဒီကေဘီအေက ဖမ်းဆီးထားသည့် ဓားစာခံများကို ငွေပေးမှ ပြန်လွှတ်မည် click
- ပြည်သူများကို ငွေချေးပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ရန် စည်းရုံး click
- ဖားကန့်မှာ လူနေအိမ်အချို့ ရေထဲမျောပါ click
- မြ၀တီ-မဲဆောက်တံတား ပိတ်မှုကြောင့် စီးပွားရေးသမားများ အခက်တွေ့ click
- နည်းပြတက္ကသိုလ်ဆရာမကို စစ်သားတဦး ကြံစည်၊ ကျောင်းသားများ မကျေနပ် click
- ရေနံလက်ယက်တွင်းများကို မယက က လစဉ်ကြေး တိုးမြှင့်ကောက်ခံ click
- မိုးခေါင်သဖြင့် တောင်သူများ အခက်တွေ့ click
- အာလူး အထွက်နှုန်းကျ၊ ဈေး (၂) ဆ တက် click
- သေနတ်မရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ကောင်းဘွိုင်တွေသို့ (ပေးစာ) click
- ဇမ္ဗုပတိချွတ်ခန်း မင်းဝတ်ဆင်းတုတော်များ (ဆောင်းပါး) click
- ဘုန်းကြီးဘရေ လာလိမ့် (ဆောင်းပါး) click
- အမေရိကန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု မြောက်ကိုရီးယား လက်တုံ့ပြန်မည် click
- ဥရောပဘဏ်တွေ ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ စမ်းသပ် click
- ဒီကနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံက လယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀သရုပ်ဖော် ပြကွက်တကွက် click
- သရုပ်ဆောင်ရဲ့မိန့်ခွန်းကို အထက်လွှတ်တော်အမတ် ခုခံကာကွယ်ပြောဆို click
- ဈေးအပေါဆုံး ကွန်ပျူတာ အိန္ဒိယ တီထွင် click
- ခေတ်သစ် တရုတ်အင်ပါယာ (ဆောင်းပါး) click
- ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူများ မျှော်လင့် click
- စစ်အစိုးရဖိနှိပ်မှုကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှုတ်ချ click
- မြန်မာပြည် ပိတ်ဆို့ရေး အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ထပ်မံအတည်ပြု click
- ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၄၅၀၀) ကျော် ငှက်ဖျားဆေး လိုအပ်ဟု CIDKP ပြောဆို click
- ကျားဖြူပါတီ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လူကြိုက်များ click
- မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီစည်းရုံးရေးခရီး ဆင်းနေဆဲ click
- မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်စာရင်းများ click
- အသင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ကိုင်မည်ဟု ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ပြော click
- တသီးပုဂ္ဂလ အမတ်လောင်းအချို့ကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံးနေ click
- USDP ကြိုတင် မဲစာရင်းများကောက် click
- ရွှေတိဂုံဘုရားမြေကို အုပ်ချုပ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းနှင့် တိုင်းသံဃနာယကအဖွဲ့က သံဃာတော် များကို ဇွန် (၃၀) နောက်ဆုံးထားပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားမြေအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ် (ပေးစာ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - အပိုင်း (၆၅) (ဆောင်းပါး) click
- ပြည်သူသည်သာ အခရာ … အရာရာကို ပြောင်းနိုင်မှာ (လေအိုးနဲ့ ရွှေဂျိုး ဆွေးနွေးခန်း) click
- ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ဘယ်သူက လုပ်ပေးမလဲ (အင်တာဗျူး) click
- ကိုဇာဂနာ ဖခင်၏ နောက်ဆုံးခရီးကို မြင်တွေ့ခွင့်မရ (ရုပ်သံ) click
- အာဇာနည်နေ့အတွက် ဂျာနယ် (၁ဝ) ခုကိုသာ ဖိတ်ကြား (ရုပ်သံ) click
- ပေါတာကြီးနဲ့ ဂျင်ဝက် (သရော်စာ) click
- သောကြာစကားဝိုင်း (ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၀) click
“နှုတ်မဆက်ခဲ့ပါတယ် ... ကျနော် ပြေးတော့မယ်” (ကာတွန်း ဟန်လေး - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
- မန္တလေးမှ ဗုဒ္ဓဂယာသို့ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း ပြေးဆွဲမည် click
- နမ့်ခမ်းလျှပ်စစ်မီးကို ပုဂ္ဂလိက ကန်ထရိုက်ဆွဲခွင့်ပေးသဖြင့် မီတာခနှစ်ဆ ပိုကုန် click
- ဘဏ်တည်ထောင်သူများ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသို့ ငွေပြန်မချေးရ click
- လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်အတွင်း နေ့စားအလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ များပြား click
- ဖားကန့်တွင် ချောင်းရေလျှံသဖြင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ ရေနစ်မြုပ် click
- ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်း ရေကြီးမှု ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများ click
- လမ်းစီမံကိန်းတွင် ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးမြေများ အသိမ်းခံရ click
- လီဒိုလမ်းမပေါ်တွင် တံတိုင်းအကာအရံတခု တည်ဆောက် click
- ဌာနပိုင် အဆောက်အအုံအတွင်း ပုဂ္ဂလိကကို အငှားချထားရန် စီစဉ် click
- နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များ အမေရိကန်သွားခွင့် ဆိုင်းငံ့မှု ရုပ်သိမ်း click
- အမေကို လွမ်းကြသူများ (ဆောင်းပါး) click
- ဟင်နရီ ပါဝင်သည့် နယူးယောက်ရက်ဒ်ဘူးလ်က စပါးကို (၂) ဂိုး - (၁) ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့် click
“မရှိတော့ပြီ” (ကာတွန်း ဟန်လေး - ခေတ်ပြိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်)
Ba Minn Din said...
ko han lay!
u r not human being,u mayban angel!
i can't help praising u!
i am satisfied n impressed with ur ideas,concept,thoughts n especially ur WIT.
when we were young,i was impressed with (u)mg sein,(u) hpe thein n then (u)mg mg,(u)shwe minn thar,n then ko kan chun,ko herju lee,moe yin(lu shay taung tan),especially KO ZAW MAUNG.
n then we have lost next generation as to our canning compressing government.we have lost the appetite for long time.
now i am contended to watch ur cartoons,in burmese'ARTHAR PYAY DE'
thank u so much ko han lay.plz,
try ur best.we r ur best fans.
ko han lay !
i forgot one person i m impressed with.he is KO AW PI GYAE.
ko zaw mg or aw pi gyae or herju lee,
one of them is son of uncle U WIN TIN.(if my knowledge is still working correctly)
I like it very much,,,,